नक्कली नोट छाप्ने मेसिन र नोटसहित तीन जना पक्राउ, कसरी बनाइन्छ दुरुस्तै पैसा ? हेर्नुहोस मंसिर १६ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
नक्कली नोट छाप्ने मेसिन र नोटसहित तीन जना पक्राउ, कसरी बनाइन्छ दुरुस्तै पैसा ? हेर्नुहोस मंसिर १६ गतेका मुख्य समाचारहरु
ScotNepal December 1, 2020
कञ्चनपुरमा नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा डेरा गरी बस्ने रितिका बम, उनका श्रीमान अनुज शर्मा र भगतपुरका दिपक नाथ छन् ।
उनका अनुसार दुवै जनालाई मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतबाट ५ दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । हेर्नुहोस मंसिर १६ गतेका मुख्य समाचारहरु :